Gabar 13 sano jir ah oo Kirishtaan oo Pakistan ah oo la soo badbaadiyay, kaddib markii la afduubtay laguna qasbay inay muslimto ayna guursato nin Muslim ah. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Gabar 13 sano jir ah oo Kirishtaan oo Pakistan ah oo la...
Gabar 13 sano jir ah oo Kirishtaan oo Pakistan ah oo la soo badbaadiyay, kaddib markii la afduubtay laguna qasbay inay muslimto ayna guursato nin Muslim ah.
Gabar 13 sano jir ah oo Kirishtaan ah kuna nool dalka Pakistan ayaa la soo badbaadiyay, kaddib markii la sheegay in la afduubtay laguna qasbay inay muslimto ayna guursato nin Muslim ah.
Gabadhan ayaa la helay bil kaddib markii waalidkeed ay sheegeen in gabadhooda uu afduubtayCali Azhar, oo 44 jir ah.
Maxkamadda ayaanan arrintaas tallaabo ka qaadin, sababtoo ah waxay ku qanceen hadalka gabadha oo ahaa inay 18 jir tahay ayna ayada iskeed u guursaneyso ninkaas.
Balse cadaadis ka yimid kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo bulshada ayaa sababay in booliisk uu tallaabo qaado.
Hoggaamiyeyaasha kaniisadaha Catholic-gga ee dalka Pakistan iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa codsaday in xukunka maxkamadda dib u eegis lagu sameeyo, iyagoo ku doodaya in gabadha lagu qasbay inay hadasho kaddib markii la guursaday. Dibadbaxayaal ayaa sidoo kale waddooyinka magaalada Karachi ka dhigay bannaanbax.
Shalay, Maxkamadda Sare ee Sindh ayaa ku amartay booliiska inay soo raadiyaan gabadha. Gelinkii dambe ee shalay ayaa la helay waxaana lagu hayaa meel ammaan ah, ilaa laga gaarayo 5-ta bisha oo ay bilaaban doonto dhegeysiga maxkamadda.
Ninka la sheegay inuu afduubtay ayaa isagana xalay la soo xiray.
Qoyska gabadha ayaa 13-kii October sheegay in gabadhooda la la`yahay. Labo maalmood kaddib aabbaheed ayaa lagu wargeliyay in Ali uu la yimid shahaadada guurka isagoo sheegay inay 18 jir tahay ayna soo muslimtay.
Qoyska ayaa sheegay in shahaadadaas ay been abuur ahayd, balse markii kiiska uu gaaray maxkamadda 27-kii October, waxay Maxkamadda Sare ee Sindh xukuntay in gabadha ay la joogto ninka.
Sida laga soo xigtay warbixin ay dhowaan soo saartay Qaramada Midoobay, guurka carruurta ayaa aad uga jira Koofurta Aasiya. Dalka Pakistan, ku dhowaad 25% haweenka ku jira da`da 20-naadka waxaa la guursaday markii ay jireen 18 sano.
uddoomiyaha guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat, ayaa cambaareeyay dilalkii dhowaan ka dhacay Itoobiya ee u dhaxeeyay qowmiyado.
Rabshadaha isirka ku saleysan ayaa beryihii dambe ku soo badanayay dalkaas, iyadoo weerar Axaddii ka dhacay gobolka Oromia ay ku dhinteen 32 qof.
Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya (EHRC) ayaa sheegay in dad ka soo jeeda qomwiyadda labaad ee ugu weyn Itoobiya ee Amxaarada lagu beegsaday weerarkaas.
Mr Faki Mahamat, ayaa qoraal uu soo saaray ku baaqay in la joojiyo rabshadaha isla markaana laga xaajoodo arrimaha ugu muhiimsan.
Wuxuu sidoo kale ku boorriyay in laga shaqeeyo wax ka qabashada xiisadaha ka sii daraya ee dalkaas ka jira.
Previous articleMidowga Afrika oo cambaareeyay dilalka isirka ku saleysan ee Itoobiya ka socda
Next articleUganda’s Bobi Wine arrested after presidential nomination: Party
Duufaanno dabaylo iyo roobab wata ayaa ku dhuftay meelo ka mida xeebaha maamulka Puntland. Waxaana la sheegayaa in ay sababtay khasaare baahsan oo gaarsiisan...
Madaxweynahii Hore Hirshabeel Calool Abgaal ayeey Gashay Hirshabeele waa in...